Baile dildo pant (ခါးပတ်ကျားတု လိင်တန်ထည့်သည် အပေါက်ပါ) – MM Online Shopping
Baile dildo pant (ခါးပတ်ကျားတု လိင်တန်ထည့်သည် အပေါက်ပါ)
Dildo Length: 15,5 cm
Dildo Diameter:4cm
Material: PVC + ABS + PU + Rubber
ဒီခါးပတျသညျ အမြိုးသားမြားအတှကျ လိငျတနျထညျ့ရနျ အပေါကျပါရှိပါတယျ …ထောငျမတျမူပိုငျးနဲ့ပတျသကျပွီး အခကျအခဲရှိသော အမြိုးသားမြား၊
role-play နှငျ့ pegging စတိုငျ စမျးလို့သော အမြိုးသမီးမြားအတှကျ ရညျရှယျ ထုတျလုပျထားပါတယျ .
အပွငျဘကျမှာ အနညျးငယျ မာသယောငျရှိပမေယျ အတှငျးဘကျမှာ နူးညံအောငျပွုလုပျထားပါတယျ .ဒါကွောငျ့ အစဈအမှနျကဲသို့ ခံစားရစပွေီး ကြားတုတှငျ သှေးကွောပုံစံမြားပါ ဖနျတီးထားသောကွောငျ့ ထိတှလှေုံ့ဆျောမူကိုလညျး ပိုပွီးမွငျ့တကျစပေါတယျ .
ဆှဲဆနျ့နိုငျသော နိုငျလှနျဖွငျ့ ပွုလုပျထားသောကွောငျ့ မိမိ ခါးဆိုဒျနဲ့အလှယျ တကူညှိနိုငျပွီး ခါးဆိုဒျတျောတျောမြားမြား အသုံးပွုလို့ရပါတယျ .
ဒီခါးပတျပါအားတုသညျ အသုံးပွုသူအမြားစုအတှကျ အံဝငျခှငျ့ကဖြွဈစပွေီး အသုံးပွုရလှယျကူက safe ဖွဈစပေါတယျ .
ဒီခါးပတ်သည် အမျိုးသားများအတွက် လိင်တန်ထည့်ရန် အပေါက်ပါရှိပါတယ် …ထောင်မတ်မူပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲရှိသော အမျိုးသားများ၊
role-play နှင့် pegging စတိုင် စမ်းလို့သော အမျိုးသမီးများအတွက် ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် .
အပြင်ဘက်မှာ အနည်းငယ် မာသယောင်ရှိပေမယ် အတွင်းဘက်မှာ နူးညံအောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ် .ဒါကြောင့် အစစ်အမှန်ကဲသို့ ခံစားရစေပြီး ကျားတုတွင် သွေးကြောပုံစံများပါ ဖန်တီးထားသောကြောင့် ထိတွေ့လှုံဆော်မူကိုလည်း ပိုပြီးမြင့်တက်စေပါတယ် .
ဆွဲဆန့်နိုင်သော နိုင်လွန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် မိမိ ခါးဆိုဒ်နဲ့အလွယ် တကူညှိနိုင်ပြီး ခါးဆိုဒ်တော်တော်များများ အသုံးပြုလို့ရပါတယ် .
ဒီခါးပတ်ပါအားတုသည် အသုံးပြုသူအများစုအတွက် အံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်စေပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူက safe ဖြစ်စေပါတယ် .
Firm on the outside but comfortably soft on the inside, this textured extender offers realistic detailing and raised veined for heightened stimulation.
The easy-to-wear harness straps are made of fully adjustable stretchy nylon that comfortably fits most sizes. Coat with lashings of your favorite water-based lubricant to enjoy this strap-on at its sexy best.
Experience powerful stimulation and penetration from this dildo made from realistic lifelike PVC material. A big strap-on dildo featuring an adjustable harness forafirm, safe and comfortable fit.
Features magnificently sculpted balls and vein covered shaft withagenerously sized head.
Be the first to review “Baile dildo pant (ခါးပတ်ကျားတု လိင်တန်ထည့်သည် အပေါက်ပါ)” Cancel reply